I-Lodge yaseStanley - I-Airbnb
I-Stanley yidolophu ebukekayo nenomtsalane apho nawuphi na umhambi uya kuyonwabela. Idolophu yonke iyigcinile isimilo sakudala kwisakhiwo sayo I-Lodge, eyakhiwe ngo-1915 yindlu elungele usapho, iqela labahlobo okanye izibini.
Ekuphela kwento ekufuneka uze nayo ziitawuli zaselwandle kunye nento oza kuyitya kwaye usele.
Enomtsalane Imbali Masonic Lodge. Iimbono zolwandle, ulwandle, i-Nut, i-Tarkine Forest Adventure, i-Sleeps 8. Balekela kule ndawo yokuhlala yabucala etofotofo kakhulu.
Le ndlu yokulala ye-3 (ookumkanikazi ababini kunye ne-singles ezimbini ezineebhedi ze-trundle) ziqhayisa ngegumbi lokuhlambela elihle elinebhafu ye-claw, indawo yokungena emangalisayo kunye ne-paseji, kodwa eyona nto ibhetele kuyo yonke indawo yokuhlala enkulu ngokumangalisayo enendawo yomlilo kunye nombono omangalisayo weNut yakho kwaye abahlobo bakho ukuphumla. Ukuba ilanga liyakhanya, sebenzisa owona moya ucocekileyo emhlabeni kwaye uhlale ngokwakho kumgangatho ongasemva; jonga ngaphaya kocingo olungasemva ukuya elunxwemeni kunye neBass Strait okanye phezulu kwi Nut ekhoyo yonke indawo ephawula iStanley ngaphandle njengendawo enomtsalane yokubalekela.
Zonke izibonelelo zale mihla zixuba ngokungenakuphikiswa, umtsalane wesikolo esidala ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kwesi sakhiwo siyimbali. Uya kuvuya kakhulu ukuba neengubo zombane zokukugcina uthobile njengoko uqwenga incwadi ebhedini! Ukuba unabantwana baya kuyonwabela eyabo cubby-indlu enetafile kunye nezitulo zabo okanye ipaki yendawo nje iingcango ezimbini phantsi kwendlela.
QAPHELA: Ixabiso lasebusuku e-Lodge lixabisa izibini ezitshatileyo - iingcango zamagumbi okulala angeyomfuneko ziya kuvalwa. Iindwendwe ezongezelelweyo zingenisa i-$50 ngomntu ngamnye, umrhumo wobusuku ngabunye. Nceda ubuze ngamaxabiso akhethekileyo eveki kunye nosapho.
QAPHELA: Iinkuni azibonelelwanga.
PHAWULA . $ 125 imali eyongezelelweyo yeZilwanyana.
Ukuloba yinkolo kule dolophu kwaye ngokuqinisekileyo kukho iNut yokujonga kwaye mhlawumbi unyuke ukuba unamandla. Konwabele ukuhambahamba ecaleni kolwandle lukaGodfrey kwaye ujonge kwimbali yaseHighfield House. Kwaye ngokuqinisekileyo kuya kufuneka uchithe usuku kwindawo entsha yokhenketho eco-ukhenketho yeTarkine Forest Adventures.
Ngokuphathelele ukutya neziselo zasekuhlaleni? Ewe, uStanley uyimbatyisi. Zenzele inceba kwaye unyuke indlela eya kwiSabelo seNgelosi - nokuba yeyewhisky, inkampani okanye i-giftware eyenziwe ngesandla, uya kuvuya ukuba wenze umzamo wokuhamba yonke imizuzwana engama-40 ukusuka kumnyango wakho wangaphambili. Chitha ixesha ujonga iimpahla eProvidore 24 kodwa kuzo zonke izinto ezikule venkile intle, into endiyithandayo sisonka somnquma. Yithathe ugoduke nayo ngqo, uyiqhole kancinci, kwaye ubeke iButter yeDuck River apho... Enkosi kamva. Iindawo zokutyela edolophini zintle kakhulu. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ujikeleze ngentloko yempelaveki ukuya ezantsi kwi-pub kwaye ubukele ukutshona kwelanga. Ukuba uye wahlala emva kwexesha kwi-pub ukonwabela i-shenanigans yasekhaya, akukho nto ingcono yokulungisa i-hangover kunesidlo sakusasa kwi-Moby Dick's Breakfast Bar. Sukugcina i-Moby Dick's kwisidlo sakusasa sokugqibela, xa uqonda ukuba yintoni ilitye elinqabileyo uya kufuna ukusebenzisa indlela yakho kwisiqwenga semenyu ngeqhekeza elimnandi (zama i-Aussie Sunrise!).
Ngenene oku kuphela incam yomkhenkce kwaye ngokufanelekileyo konke ngaphakathi 2 imizuzu ukusuka The Lodge, kodwa ngakumbi uphonononga Stanley kokukhona uya kufumana ukuthanda.
Umthi Omkhulu eDip Falls kunye noMda weHlabathi e-Arthur River yimizuzu engama-45-60 kuphela ukusuka eStanley.
Ulawula ukuhlala kwakho akukho mamkeli. Le yindawo yokuhlala ezimeleyo ngokupheleleyo. Azikho ezinye iindwendwe endlwini ngaphandle kwakho kunye neqela lakho lokubhukisha lobuqu abahlobo okanye usapho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stanley